Moments Neshamwari 55
Chii chinoreva kunhuwa; unoita sei; kuita zvikamu zvepanyama zvinobatanidza mukugadzirwa kwekunzwa, uye chikamu chipi chinonhuwira chinotamba mukurarama?
Izvo zvinonzi kunhuwa, ndiko kuona kwechimwe zvinhu zvezvinhu. Izvi zvivakwa zvinoshanda pamunhu kuburikidza nechinhu chake chinonhuwira, kwavanosvika kune iyo olgicory nerve. Iyo nerve inopa chinhu chakavanzika, chiri muchinhu chemuviri, kune chimwe chinhu mumuviri wemunhu. Ichi chiitiko ndicho chiripo icho chinoratidza chimiro chechinhu kuburikidza neruzivo rwunogamuchira kuburikidza neveveve yekunhuhwirira. Iyo chiumbwa ndeye elemental, mweya wechisikirwo weiyo kirasi yepasi mizuru. Chinhu chinonhuwira chakabatana ne uye ndechimwe chezvisikwa zvinopinda mubumbiro uye chimiro chemunhu elemental. Iko kunhuhwirira kunokosha kuri kwechinhu chepasi, uye nechikonzero ichocho unogona kuona chimiro chechisiko chepasi, icho chinoratidzwa nezvinhu zvepanyama. Saka mhinduro kumibvunzo "Chii chinonzi kunhuhwidza uye chinoita sei?" Ndechekuti chiri chinhu, chiri chinhu chepasi mukati memunhu chepanyama mumuviri, icho chinonhuwirira chinotanga kuona chimiro chehumwe humwe hunhu munyama miviri, iyo inonzi inhuhwirira kana kunhuhwirira.
Aya hunhu anoonekwa nekunhuhwirira chete. Kunyemwerera ndiko zvese izvi zvinoita. Kunhuhwirira ndiko chikafu chayo, chinovimbisa uye nekuchitsigira. Inoona humwe hunhu uye mamiriro epasi epasi kunze. Kunyemwerera ndicho chisingaoneki, chakavanzika chepasi chinhu, icho chinopinda mubumbiro rechinonhuwirira elemental uye saka mune chevanhu elemental.
Zvidimbu zvepanyama zvechinhu icho chinoonekwa nekunhuhwirira kwayo zvinopinda mukugadzirwa kwekunzwa kunhuhwirira. Kwete chete zvimedu izvo zvaive zvechinhu chepanyama asiwo zvikamu zvevhu zvepasi sezvanga zvayerera kuburikidza nechinhu, zvichikonzeresa kunhuwa. Chinhu chepasi chakafanana nedutu, inoyerera ichidzokera nechinhu. Kuyerera kunoumbwa neinopfupika, isingaoneki tunhu tunoratidzika kunge hwakaomeswa; asi kana pfungwa yemukati yekuona ichinyatso kukwana uye pfungwa dzichigona kuongorora inoyerera, kuyerera uku kunozoonekwa sekunge kuri kugadzirwa nezvimwe zvinhu.
Kana mamiriro ekunze emunhu akabatana nemweya wemukati wechinhu chakanyemwerera-izvo mhepo iri kugadzirwa nezvidimbu zvinotaurwa-izvo zvimisikidzwa zvinoonekwa mumhepo yemunhu anenge achinyemwerera, kana vabata nerve yevira. Kunhuhwira hunhu hwakajeka hwehunhu hwezvinhu zvinofungidzirwa. Chese chinhu chemuviri chine chayo chakasarudzika mumuviri, mune izvo zvimedu zvinomisikidzwa uye zvinotenderera. Asi zvinhu zvishoma zvinogona kunhuwa. Icho chikonzero ndechekuti maonero nepfungwa yekunhuwa haana kudzidziswa uye haana kukwana zvakakwana. Kana pfungwa yekunhuhwidza ikadzidziswa, senge dzeemapofu, zvinhu zvakawanda zvinogona kunhuwa izvo ikozvino zvinowanzoonekwa sekusina munhuwi.
Iko kuchine pfungwa yekufunga yekunhuhwirira, iyo pfungwa yemukati, iyo inogona kugadzirwa uye iyo vamwe vanhu vakatogadzira, iyo iyo kunhuhwirira kwezvinhu zvisiri zvepanyama kunogona kuonekwa. Zvibereko zveimwe nyika zvinogona kuzviita ivo vazivikanwe nekunhuhwirira, asi ichi hachisi kunhuhwirira kwemuviri.
Chikamu icho chinonhuwira chinorarama pakurarama ndechekuti kunhuhwirira zvinobatsira mukuchengetedza kwehupenyu. Kunhuhwirira kwechikafu kunoita kuti majuanagidhi abude kuyerera uye nekuasimudza, sezvinoita kuona kwetafura yakanyatsogadzirirwa. Mhuka dzinoona nepfungwa dzadzo dzekunhuhwirira idzo dzavanowana chikafu. Ivo vanoona kuvapo kwevavengi nengozi nekunhuhwirira.
Zvakare munhu arikudya izvozvi kuburikidza nekubatwa kwechinhu chakavanzika icho system yake inobvisa muzvikafu zvakawandisa zvaanodya, zvichazoitika mune ramangwana, kana munhu ave nesimba rekutonga muviri wake, zvichakwanisika kuti abviswe pfungwa yekunhuhwirira iyo iye ikozvino inofanirwa kuwana nekugaya kunze kwekushandurwa kwechikafu chemuviri. Hunhu hwake hwekunhuhwirira huchazopihwa mhosva yekupa hutano mumuviri. Iyo miviri yekuravira uye yekunhuhwirira ichave, zvakadaro, inofanirwa kuve yakashandurwa zvikuru kubva kumamiriro ezvinhu avari panguva ino kurapwa nekunhuwa kwega kunogoneka. Ipapo zvidimbu zvakavanzika zvemuviri izvo zvichange zvichidhonzwa neyekunhuhwirira chinhu ichave nzira yekupa simba muviri wemuviri.
Chii chifungiro? Inogona sei kukudziridzwa uye kushandiswa?
Kufungidzira ndiyo mamiriro epfungwa iyo mune iyo chifananidzo chepfungwa inoshanda nehunyanzvi kupa chimiro kune icho chinhu chekufunga icho chemultultult chakafunga uye icho chakatarisana nehunyanzvi chakaunza mukati uye chinobata mukati mehunyanzvi. Aya matatu masimba epfungwa ane chekuita nekufungidzira. Iwo mamwe mana masimba ane hanya zvisina kunangana. Iyo yakasviba yakasviba inopindira nekufungidzira, sezvainoita nebasa rimwe nerimwe refungwa, uye nekudaro iyo yakasviba yakasviba inofanira kunge iri munzvimbo iyo inotongwa zvakaringana kubvumira kwebasa rekufungidzira. Iyo fekitori yenguva inopa izvo zvinoshandiswa mune basa rekufungidzira. Iyo mwenje wechiedza inoratidza maitiro ekuitwa kwebasa rekufungidzira. Iyo I-ini yekumusoro inopa kuzivikanwa uye humwechete kune basa rekufungidzira. Kufungidzira imamiriro epfungwa, uye mukati mayo yoga haisi yemanzwiro. Basa rekufungidzira rinoitiswa mundangariro risati rakanangana nemanzwisisiro epfungwa nepfungwa dzisati dzadaidzwa kuti dzipe kutaura munyama kune izvo zvakatanga kuitwa mukufungidzira. Izvi ndizvo zvakaitika nekufungidzira. Nekudaro, zvinofanirwa kuve mupfungwa kuti izvo zvinowanzonzi kufungidzira hazvisi zvekufungidzira zvachose. Chii chakawanda uye pasina nzwisiso yezvinoreva izwi rinoti kufungidzira ndiko kutamba kwepfungwa mupfungwa, kana, padanho repamusoro, kushanda kwepfungwa kana kuchimanikidzwa nenjere kubereka kana kuburitsa zvinhu izvo ipa mafaro kunzwi uye nekupa kunakidzwa kutsva kana matambudziko zvakaratidzwa nenjere uye zvinotungamira pfungwa mazviri. Muchiitiko chechimiro ichi, icho chinonzi chisiri kufungidzira, zvese zvinomwe zvemukati wepfungwa zvinogadziriswa kuburikidza necustomer faculty; asi izvi zvevakuru zvinongova kufara kwehumwe humwe hunyanzvi kuburikidza nehunyanzvi hwekutarisa uye harusi basa reunyanzvi. Iyo yekutarisa yekumusoro ndiyo yega hunyanzvi hwepfungwa hunosangana zvakananga nehuropi hwemurume wepakati. Mamwe madhiri matanhatu haawirirane. Kuita kwavo kunosimudzirwa kuburikidza necustomer yekutarisa.
Kuti unzwisise zvirinani kufunga - izvo, kufungidzira chaiko - kuri, kunofanirwa kuoneka izvo kufungidzira kwenhema - ndiko kuti, kungofungidzira kunonzi kunyepa chaiko - Kufunga kwenhema hachisi chiito chekuziva kwehunyanzvi hwepfungwa, asi kuita kwechimwechete, iyo yekutarisa chete, iyo inomutswa nemanzwiro uye iyo painomuka inokonzeresa kusagadzikana kwehumwe hutanhatu kana humwe hwayo.
Fancies, zviroto zvezuva, mwedzi, hazvisi zvekufungidzira. Kuberekerwa kwemafomu uye zvimwe zvinhu zvakasikwa hazvisi zvekufungidzira. Kutevedzera chero basa, raive rechisikirwo kana revanhu, harisi rekufungidzira, zvisinei nehunyanzvi zvinogona kuitwa. Kufungidzira chisikwa. Basa rega rega rekufungidzira chisikwa chitsva. Kufungidzira hakuna kutevedzera zvakasikwa. Chakasikwa hachiratidzi pfungwa yekuita basa rekufungidzira. Kufungidzira kunopa zvisikwa nemafomu ake ese uye mavara uye manzwi uye akasiyana siyana. Izvi zvakarongedzwa kune zvakasikwa nepfungwa uye kwete nemasikirwo.
Kukudziridza kufungidzira - ndiko kuti, mamiriro epfungwa umo chifananidzo chifananidzo, vavariro yekushambadzira, uye nzvimbo yekutarisirwa inorongwa pamwe nekuita basa ravo mukuwirirana, nepo rima remuchati rakaderera kana kudzvinyirirwa, uye humwe humwe hutatu hwehunyanzvi , nguva yekugadziriswa kwese, iyo yekubhenekera, uye iyo I-ini fakisi inobatsira pabasa iri-zvinodikanwa kuti unzwisise maitiro ataurwa pano, inova chete hurongwa hunopa nzwisiso mukushanda kwepfungwa.
Nhanho yechipiri ndeye kugona kutora musoro wenyaya wekufunga, uye chinhanho chinotevera ndechekushandisa chimiro chemufananidzo mukuwirirana neiyo motive yekutarisa uye yekutarisa kwemaonero. Anobvunza anonzi izvo zvinyorwa zviviri zvekufungidzira zvakabuda mumagazini aMay naJune e SHOKO, mu1913. Nezve kune hutano hwepfungwa, ruzivo runogona kuwanikwa mukati chinyorwa, "Anogamuchira, Masters, uye Mahatmas," yakadhindwa muIYO SHOKO munaKubvumbi, Chivabvu, Chikumi, Chikunguru, uye Nyamavhuvhu, 1910.